Dowladda Soomaaliya oo shaacisay khasaaraha rasmiga ah ee Qaraxii Soobe
Dowladad Federaalka Soomaaliya ayaafaah faahin dheeraad ah ka bixisay khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashey qarixii bahalnimada ahaa ee 14kii Bishan ka dhacay Isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho. Sh
Khudbadii Jimcaha Masjidka Abubakar Nairobi oo looga hadlay Xasuuqii Muqdisho (Daawo)
Nairobi:-Waxaan idinka soo gudbineynaa Khudbadii Jimcaha Masjidka Abu Bakar ee magaalada Nairobi waxaana Khudbada jeediyey Sheekh Maxamed Cabdi Umal Xafidahulaah waxaana uu khudbadiisa uga hadlay Xasu
Qardho:-Madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo wefti uu hogaaminayo ayaa maanta 20 October 2017 booqasho ugu soo ambabaxay magaalada Qardho ee gobolka Karkaar. Madaxweynaha
Ogeysiis Muxaadaro diiini ah oo lagu qaban doono Masjidka As-Sunnah ee Gobolka Minnesota/Minneapolis
Minneapolis:-Dhamaan Jaaliyada muslimka ah ee ku nool magaalooyinka Mataamaha ah ee Gobalkan Minnesota/Minneapolis iyo St.Paul, MN Waxaa la ogeysiinayaa inuu Masajidka As-Sunnah idiin soo diyaariyay M
Hooyo iyo ilmaheeda lagu Dilay Duleedka Qandala.
Kooxo hubeysan ayaa xalay Tuulada Canjeel ee ka tirsan degmada Qandala waxay ku dileen Haweeney iyo Ilmo ay dhashay. Dadka deegaanka ayaa sheegay in koox hubeysan oo ka tirsan ururka Daacish ay